अस्पतालमा ज्वरोका बिरामी बढे, बेड नपुगेपछि भुँइमै राखेर उपचार - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ लुम्बिनी प्रदेश ∕ अस्पतालमा ज्वरोका बिरामी बढे, बेड नपुगेपछि भुँइमै राखेर उपचार
अस्पतालमा ज्वरोका बिरामी बढे, बेड नपुगेपछि भुँइमै राखेर उपचार
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७८ साउन २७ गते, १०:५४ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज—नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा ज्वरो आएर उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या ह्वातै बढेको छ । ज्वरोका बिरामीहरुको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा बेड नपुगेपछि बिरामीहरुलाई भुँइमै राखेर उपचार गर्न थालिएको छ ।
भेरी अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा १६ बेड छन । ती सबै बेड बिरामीहरुले भरिएका छन् । बिरामी र बिरामीका आफन्तहरुका कारण अस्पताल परिसरमा भिडभाड बढेको छ ।
ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने लक्षण भएका बिरामीहरुको संख्या पछिल्लो एक सातादेखि बढ्दै गएको छ । इमर्जेन्सी वार्डमा मात्रै दैनिक २५/३० जना सम्म ज्वरोका बिरामीहरु उपचारका लागि आउने गरेका छन् । उनीहरुमा देखिएको स्वास्थ्य समस्या कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो छन् ।
ज्वरो आएका बिरामीहरुको पिसिआर परिक्षण गर्नुका साथै अस्पतालमै भर्ना गरेर उपचार गर्ने गरिएको छ । गर्मी मौसममा धेरै कारणले मासिनहरुलाई ज्वरो आउन सक्छ । अस्पतालमा आएका कतिपय बिरामीहरुमा भाइरल ज्वरो, डेंगु, स्क्रब टाइफससमेत देखिएको भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डेले बताए ।
पछिल्ला दिनहरुमा बाँकेमा कोभिड–१९ संक्रमणका केसहरु पनि बढ्दै गएका छन् । दैनिक ३० देखि ४० जनासम्म कोभिडका नयाँ संक्रमितहरु थपिने गरेका छन् । भेरीको ओपिडीमा दैनिक ३ देखि ४ सय र इमर्जेन्सीमा दैनिक १ सय जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
ट्याग : #इमर्जेन्सी वार्ड, #ज्वरो, #डेंगु, #फिजिसियन डा. राजन पाण्डे, #भुँइमै राखेर उपचार, #भेरी अस्पताल, #स्क्रब टाइफस